मन्त्रीले भनिन् ‘चोरी गर्नु मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो’
युपी। भारतको उत्तर प्रदेशमा योगी सरकारकी महिला विकास राज्यमन्त्रीले आफू चोर भएको सार्वजनिक समारोहमै स्वीकार गरेकी छिन् । उनले एक सार्वजनिक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भनिन् ‘हो म चोर हुँ । यो मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो ।’ उनले आफ्नो पतिको खल्तीबाट…
अफिस बिल्डिङका आश्चर्यजनक दश तस्बिर
भारतको विभिन्न ठाउँमा रहेको आश्चर्यजनक अफिस बिल्डिङका दश तस्बिर ।
निर्माणाधीन पोचो गुम्बा
मनाङको नेस्याङ गाउँपालीका–८ मा निर्माणाधीन पोचो गुम्वा । तस्बिर : नवीन लामिछाने, मनाङ, रासस
दर्शनार्थीको प्रतिक्षामा डुङ्गा
पोखराको फेवातालस्थित तालबाराहीमा दर्शन गर्ने भक्तजनको पर्खाइमा रहेका डुङ्गाहरु । अहिले यहाँ पर्यटकको आवागमनमा कमी आएको छ । तस्बिर: प्रदीपराज वन्त, रासस
बोधिचित्त बोटको विवाद अझै मिलेन
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाको एउटा रुखमा फलेको बोधिचित्त फलको विवाद अझै मिल्न सकेको छैन । जिल्ला प्रसासन कार्यालय, धुलिखेल र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भएको पटक पटकको छलफल निष्कर्ष विहीन भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद शिङ्खडाले बोधिचित्तको बोटधनी…
विवादको दलदलमा भासिदै निर्वाचन आयोग
काठमाडौं। निर्वाचन आयोग एकपछि अर्को विवादमा तानिएको छ। राजनीतिक चलखेलका कारण विवादमा तानिदै आएको गैरराजनीतिक एवं संवैधानिक निकाय भित्र आर्थिक चलखेल पनि उत्तिकै हुने गरेको खुलेको छ। बिलासी गाडी किन्न लाग्दा तगारो बनेका सचिवको सरुवा बिलासी गाडी नपाएको झोंकमा निर्वाचन…
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड सञ्चालन अनिश्चित
काठमाडौँ । कालिखोलालगायतका विभिन्न ठाउँमा पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएपछि नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड तत्काल सञ्चालनमा नआउने भएको छ। गएराति कालिखोला नजिकै पहिरो जाँदा प्रहरी सवार भ्यान र एक ट्रक पहिरोसँगै त्रिशूलीमा खसेका थिए। पहिरोमा दुई जना प्रहरीको ज्यान गएको छ भने…
भारतसँग सीमा जोडिएका कञ्चनपुरमा ६६ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका ६६ वटा मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले भारतसँग सीमा जोडिएका मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील क्षेत्रको सूचीमा राखी सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाएको हो । सुरक्षाका दृष्टिकोणले मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरी…
पूरानै राजनीतिक दललाई भोट हाल्नु बेश!
इन्जिनियर दिपेन्द्र कंडेल नेपालको विकास पुरानै राजनीतिक दलहरुबाट संभव छ, तर तिनीहरुलाई यतिबेला क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ। खासमा समस्या भनेको राजनीतिक दल र दलका नेताहरुमा छैन्। बरु, समस्या त दलको प्रशासनिक संरचनामा व्याप्त छ। त्यसैले ठूला तथा पुराना दलहरुको…
दुई बालकलाई खोलाले बगाउँदा विद्यालयमा तोडफोड
सोलुखुम्बु । खहरे खोलाले बगाउँदा दुई विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि तिनका आफन्तले विद्यालयमा तोडफोड गरेका छन् । विद्यालय प्रशासनको लापर्बाहीका कारण विद्यार्थीको मृत्यु भएको आरोपसहित आफन्तले आक्रोश व्यक्त गर्दै विद्यालयमा तोडफोड गरेका हुन् । विद्यालय प्रशासनको लापार्बाहीले घटना भएकाले घटनाको जिम्मा…
‹ First Newer 1521 1522 1523 1524 1525 Older Last ›
करिश्मा र जयकिशन अभिनित ‘हिरोज’को रिलिज डेट तय
कान्छीको नयाँ गीत : एक पल बस एक पल (भिडियो)
बलिउड अभिनेत्री श्रीदेवीको हृदयघातका कारण निधन
बलिउड अभिनेत्री श्रीदेवीका अन्तिम तस्वीर, विवाहमा सहभागी हुन पुगेकी थिइन् दुबई
बिहेको ७ घण्टामै बेहुलीले जन्माइन बच्चा, ससुरा बेहोस बेहुलाको उड्यो होस
पहिलै थाहा थियो अमिताभलाई श्रीदेवीको मृत्युको खबर : २० मिनेट अघि गरेका थिए यस्तो ट्वीट
शिल्पा र पुष्पको बिहे ! छबिसँग यस कारण झगडा (भिडियो)
अर्कै प्रेमीलाई रिझाउन आफैं काजोललाई लभ टिप्स दिन्थे अजय, यसरी भयो यी दुईको बिहे
पानीमा डुबेर दुई वर्षिय बालकको मृत्यु
छोरीको विहेमा दीपकले खर्चिए १ करोड : ६० लाखको अपार्टमेन्ट उपहार (भिडियो)
श्रीदेवीका बारेमा सार्वजनिक नभएका दश कुरा
आजको राशिफल – मिति २०७४ साल फागुन १४ गते एकादशी तिथि सोमबार (भिडियो)
माओवादी संसदीय दलको मुख्य सचेतकमा नेपाली
छिनभरको सनकले ४२ महिनामा २,१६४ को हत्या
आज मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने, को को बन्दैछन् मन्त्री ?
मन्त्रीले पाउँछन् दिन गन्तीको तलब
देउवामाथि पौडलको प्रश्‍न – गुट संरक्षकबाहेक के गर्नुभयो ?
दुवईमा श्रीदेवीको पोस्टमार्टम पुरा, पार्थिव शरीरलाई आज मुंबई ल्याइने